Yangon United အသင်း မြန်မာ နေရှင်နယ်လိဂ် ချန်ပီယံသစ် ဖြစ်လာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » Yangon United အသင်း မြန်မာ နေရှင်နယ်လိဂ် ချန်ပီယံသစ် ဖြစ်လာ
Yangon United အသင်း မြန်မာ နေရှင်နယ်လိဂ် ချန်ပီယံသစ် ဖြစ်လာ
Posted by အူးစည် on Sep 28, 2011 in News, Sports & Recreation |6comments
ယနေ့ ညနေ ၃း၅၀ ကန်သွားတဲ့ MNL နေရှင်နယ်လိဂ်မှာ ရန်ကုန် FC – ဧရာဝတီ FC တို့ ၂-၂ ဖြင့် သရေကျသွားပြီး ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်က ချန်ပီယံဖြစ်သွားပါတယ်… အသင်းနှစ်သင်းလုံး ကြိုးစားပမ်းစားနဲ့ ရေ၀ပ်တဲ့ လယ်ကွင်း.. (အဲ… သုဝန်ဏကွင်း) မှာ ကန်သွားကြတာပါ။ ဦးဆောင်ဂိုးတွေကိုတော့ ဧရာဝတီအသင်းကပဲ အရင်သွင်းသွားတာပါ။ နောက်နှစ်ရဲ့ AFC cup ကိုတော့ ရန်ကုန်ယူနိုက်တက် အသင်းက ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်…
မနှစ်က ချန်ပီယံဟောင်း ရတနာပုံအသင်းကတော့ AFC cup အုပ်စုအဆင့်ကပင် ဂိုးတွေ အလှူပေးပြီး ထိုင်ဝမ်ကနေ ဖျာလိပ်ပြန်ခဲ့ရကြောင်းလည်း သိရှိရပါတယ်….
အာဖရိက ကုလားမဲတွေခေါ်ပြီး မိုက်နေတဲ့ ရန်ကုန်ယူနိုက်တက် အသင်းလည်း နောက်နှစ် AFC cup မှာ ဘယ်လိုမျိုး ၀င်ရောက် အနှိပ်စက်ခံရမလဲ ဆိုတာတော့ မြန်မာပြည်ဘောလုံးလောကရဲ့ အနာဂတ်ကို ရင်ခုန်စွာနဲ့ စောင့်မျှော် ကြည့်ရှူ့ရပါတော့မယ်… ခင်ဗျာ… သိတဲ့သူ ရှိရင်လည်း ဝေဖန်ပေးသွားကြပါဦး…
မနေ့ က ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်ကို အားပေးဖို့ ဆိုပြီး အဲပုဂံလေယာဉ်၇န်ကုန်၇ုံးနေ့ တစ်ဝက်ပိတ်လိုက်ပါသေးတယ်။ အခု ပိတ်၇ကျိုးနပ်သွားတာပေါ့။
လကဗျာလေးက ပုဂံပြားပျံကုမ္မဏီကလား။ အီးတီဂြိုလ်သားလို ရုပ်မဆိုးဘူးဆိုတာ ရေးထားတဲ့ စာလုံးလေးတွေ ဖတ်ကြည့်ရုံနဲ့ သိသာပါတယ်ကွယ်။ ထွန်းသစ်စ လမင်းကြီးလို ဝိုင်းစက်နေတာပဲ။ ဦးကြောင်လည်း လေယာဉ်မောင်းတတ်တယ်။ ဦးတေဇကို ပြောပေးပါကွယ် အသစ်ဝယ်မဲ့လေယာဉ်မှာ စက်ဘီးချိန်းကြိုးနဲ့ လက်ကိုင်တပ်ပေးရင် ဦးကြောင် အားသွန်ခွန်စိုက် နင်းပေးပါ့မယ်လို့။ ခရီးသည်တွေကို နောက်ခုံမှာထား၊ မွန်းကလေးက ရှေ့ဘားတန်းမှာထိုင်၊ ဦးကြောင်ကြီးက မမောနိုင်မပန်းနိုင် ရှေ့မှာနင်း……
ပိတ်ရကျိုးမနပ်ပါဘူး.. လကဗျာလေးရယ်… ရန်ကုန်များ အသည်းအသန်လိုက်ကန်ရတာ.. ကြည့်တောင်မကောင်းဘူး။ …. ၂-၂ ဆိုတော့ ညှိကန်သွားတာလေ… ဟိုဘက်အသင်းလဲ မရှူံးဘူး။ ရန်ကုန်အသင်းလဲ ချန်ပီယံဖြစ်… မလှပေဘူးလား။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အဲဇလုံက ဒီနှစ်မှာ ရမယ်ဆိုတာတော့ အစကတည်းက ကျနော် ရိပ်မိပြီးသာပါ။ မရရအောင် ယူမယ် ကြုံးဝါးထားတာလေ…
ညှိကန် သွားတာတော့ မဖြစ်နိုင်ဘူး. ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဧရာဝတီ အသင်းကလည်း ဒီပွဲနိုင်၇င် ချန်ပီယံ ဖြစ်မှာပဲလေ…
သေချာပါတယ်.. ကိုယ့်ဆရာရယ်… ရန်ကုန်ကလည်း ဂိုးသာသွားမှာစိုးလို့ ဂိုးသမား သီဟစည်သူနဲ့ တွေ့ရင် ဘေးချော်ချော်ကန်နေတာ အသိသာကြီးပါ။ ပရိသတ်တွေကို ရင်ဖိုအောင် တမင်သက်သက် အကွက်လုပ်ထားတာ အသိသာကြီးပါ။ အသင်းပိုင်ရှင်တွေနဲ့ နည်းပြတွေရဲ့ လုပ်ကွက်တွေကို ကျွန်တော်တို့ တွေးကြည့်ရုံနဲ့ထင်သာပါတယ်။ ပထမပိုင်း ၁-၁ နော်.. ဒုတိယပိုင်း ၂-၂ ဧရာဝတီကို အရင် ၁ ဂိုးစီ ပေးပြီး ရန်ကုန်က လိုက်သွင်းတာနော်။ ဘာလို့ သရေယူတာလဲ အသင်းနှစ်သင်းလုံး ပိုင်ရှင်တွေမှာလဲ စီနီယာ ဂျူနီယာရှိတယ်လေ..။ (ဥပမာ – ခင်ဗျား အလုပ်မှာ စီနီယာဖို့ ဖယ်ထားတဲ့ ဟင်းတပွဲကို ခင်ဗျားက တော်ပါတယ်ဆိုပြီး ၀င်စားလိုက်ရင် ခင်ဗျားကို သူဘယ်လိုထင်မလဲ။ ခင်ဗျားကော စားရဲလား။ စားပြီးရင်ကော ခင်ဗျားကို စီနီယာက ကျေနပ်နိုင်ပါ့မလား။) ဧရာဝတီက သေချာပေါက်နိုင်ပြီး ချန်ပီယံ ဖြစ်ခွင့်ရှိရင်တောင် အသင်းပိုင်ရှင်တွေကြား မျက်နှာ ပျက်စရာဖြစ်မယ်လေ။ ဒီချိန်ပီယံဆုကို ဧရာဝတီအသင်းပိုင်ရှင်ရသွားလည်း စားမကုန်တဲ့ ပါမစ်တွေကျမလားဘူး။ ရှင်းပီလား။ ဒီပွဲအဖြေက နှစ်ဖက်စလုံးအတွက်လှတယ်။
( အာဖရိက ကုလားမဲတွေ ) အစား အာဖရိကန်ကစားသမားတွေ လို့
ပို့စ်တစ်ခုရဲ့ သဘောအရ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ကို ဆဲတာထက်